Malpractice Personal Injury emetụtaghị okwu ikpe | Los Angeles Personal mmerụ Lawyer,houston personal injury lawyer
Home » Onye ọkikpe ikpe » Malpractice Personal Injury emetụtaghị okwu ikpe
Malpractice bụ otu n'ime ndị kasị egregious ụdị nke ejighị ihe kpọrọ ihe nke pụrụ a onye mmerụ lawsuit.Chicagopersonal mmerụ ọkàiwu obibi malpractice ikpe mgbe nile, dị ka ọ bụ ihe nke na nso nso abịa a oké larịị nke ọha ntị. Ọ bụrụ na i kwere na ị nọwo na a aja malpractice.
Nke a na ụdị ana achi achi na ọka iwu ndị kọntaktị i nwere onye ruru eru na ahụmahụ na ubi nke gị kpọmkwem case.Chicago onye mmerụ ahụ maara Iwu obibi a dịgasị iche iche nke ikpe mgbe niile, ma malpractice emetụtaghị okwu ikpe na-abụkarị ndị kasị ịkpasu iwe onye mmerụ ahụ emetụtaghị okwu ikpe. Nke a bụ n'ihi malpractice emetụtaghị okwu ikpe n'ozuzu na-agụnye imebi ntụkwasị obi, ebe a ndidi na-eduhie (mgbe ụfọdụ purposely) site otu onye ma a ìgwè mmadụ, bụ ndị kwesịrị ịbụ achọ ya mma mmasị.
Malpractice bụ a miri emi akpasu iwe nke ọtụtụ, ma ọ kwesiri ka a mesoo site onye ọka iwu ndị na-egosi ọmịiko na a raara onwe ya nye-eme ihe ziri ezi n'ihi na you.Types nke Malpractice Otu ihe na-atụle n'ihu na-na-eleta gị Chicago ebe onye mmerụ ọkàiwu na-kpọmkwem nke ụdị malpractice i kweere na ị bụrụ ndị e doro. Malpractice ụfọdụ na-dị ka oké dị ka ihe n'ihu ọha eleghara dọkịta onye na-arafu unu ma ọ bụ ụgha si na-elekọta ụfọdụ ọgwụ ma ọ bụ ọgwụgwọ.
Nke a na ụdị malpractice na-emekarị ka ihe a gbara ọkpụrụkpụ ikpe n'ụlọikpe. Ọ bụrụ na ị kwere nke a na-akọwa gị malpractice ikpe, ị kwesịrị ijide n'aka na nye ndụmọdụ gị ọkàiwu na ihe ọ bụla na-egosi na i nwere ike ugbu a na-enwe na ihe nketa nke. Otú ọ dị, ọ dị ihe ọzọ ụdị malpractice na-arụ ọrụ na a ukwuu dị iche iche n'ụzọ na mgbe ụfọdụ ike identify.Institutional malpractice na-emekarị a ụkpụrụ nke nleghara anya na A dịghị orchestrated otu dọkịta ma ọ bụ ọgwụ ọkachamara akpan akpan.
kama, institutional malpractice na-ewe ebe karịrị otu oge nke ọnwa ma ọ bụ afọ na bụ ya mere o sikwuoro gị ike igosi. Ị kwesịrị ị na-Olileanya nwere ụfọdụ ihe àmà gbara ọkpụrụkpụ na-ezo aka dị ka ihe àmà nke anaghị elekọta ndị ezinụlọ ọgwụgwọ na akụkụ nke ọgwụ na ahụ ike maara ọrụ ha ebubo na-elekọta gị ma ọ bụ onye a hụrụ n'anya. Nke a pụrụ ịgụnye iti ihe nakwa dị ka ihe n'ezinụlọ iche nke mmegbu ma ọ bụ neglect.Malpractice SettlementsMalpractice suut abuana a onye mmerụ ahụ ikpe na-boro a ọgwụ ọkachamara ma ọ bụ a ọgwụ na ahụ ike na alụmdi.
The price of nlekọta ahụ inChicagois skyrocketing elu na ngwa ọnụego karịa mgbe ọ bụla, na-abụkarị ndị kacha ihe mgbaru ọsọ nke nlekọta ahụ ike ndị ọkachamara ndị na-elekọta anyị na-ekwesịghị ileghara anya. The mgbaru ọsọ kasịnụ nke ọ bụla ọgwụ na ahụ ike ọkachamara bụ na-enye nlekọta na nkasi obi ọrịa ha ka ha. Mgbe ị nọ nlekọta ahụ, ị na-adịghị a “ahịa,” ma unu kama a “ndidi.” Nke a dị iche bụ aghụghọ ma na-emesi ihe dị otú idiọk ke nte ọtụtụ ndị taa na anya ọrụ ahụ ike itself.Being lekọta ha ọgwụ ọkachamara na-incredibly oké ọnụ, -ewe oge na mkpokọta agwụ ahụmahụ, n'ihi ya, ọ bụ ihe karịrị ngosi na-atụ anya a ụfọdụ larịị nke na-elekọta.
Nke a n'ogo nke na-elekọta adịchaghị abuana azụtọ ma ọ bụ ihe ọ bụla tinyere ndị edoghi, ma ọ dịghị egosi na ndị na ọkachamara n'ilekọta ị ga-adị ndụ ruo guzosie ike n'ụzọ iwu na ụkpụrụ omume nke ọrụ ha na-. Mgbe nke a anaghị eme eme, ị na-doro anya na-isiokwu na a mmezi. The ego nke gị mmezi nwere ike adabere na a dịgasị iche iche nke ihe, gụnyere ókè gị unan na / ma ọ emebi obosara na ihe rụpụtara ha (oge Agbaghara ọrụ, ọmụmaatụ). Ịnwetacha uru ịrụ ihe ndị a bụ gị uru, na-achọ na i nwere a top notchChicagopersonal mmerụ ọka iwu gị nkuku.
Dejupụta ndị kwụ ọtọ n'ụdị hụrụ na a website bụ ihe kasị oge oru oma ụzọ inwe na aka a ruru eru n'ụzọ iwu ọkachamara. Achụ a Malpractice Ezu achụ a malpractice uwe nwere ike ịbụ a tara akpụ ọrụ. Ị na-yiri na-aga elu megide mmadu na, ọgbakọ nke mmadụ, ma ọ bụ na alụmdi na nwere nnukwu ego nke ego ha nwere. ekele, ị nwere eziokwu na ina ikpe ziri ezi na gị n'akụkụ.
N'ịhụ na gị ọkàiwu na-aghọta ịdị ngwa nke gị na mkpa gị na-enweta nnọọ ụgwọ maka ihe gị nhụjuanya bụ nke kasị mkpa. Nanị laghachi n'ụlọ peeji nke ma dejupụta ngwa na mfe ụdị ị na-ahụ n'ebe ahụ ga-adịkwa elu na a ruru eru na vettedChicagopersonal mmerụ ọka iwu. Ọ ga-fọrọ nke nta n'ezie na-kasị na-amị mkpụrụ 30 sekọnd nke ụbọchị gị.
bepụ ụkwụ mmerụ